Milatariga oo amar ku bixiyay in laga guuro dhulka ku dhaw Wasaarada Gaashaandhiga iy | Puntlander.com
← Siyaasigii aflagaadeeyey Caa’isha Romano oo raalli-gelin bixiyey
Xiddig oo sheegay iney dacwad ku soo oogayaan Wakiilka Midowga Afrika ee Somalia →
Milatariga oo amar ku bixiyay in laga guuro dhulka ku dhaw Wasaarada Gaashaandhiga iy
Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in Saraakiil katirsan ciidanka milatariga Soomaaliya ku amreen dadka degan xaafadaha ku dhaw dhaw Wasaarada Gasahaandhiga in ay si deg deg ah isaga guuraan.
Dadka deegaanka ayaa noo sheegay in Janaraal katirsan saraakiisha milatariga ku amray in ay ka guurana dhabarka dambe ee wasaarada Gaashaandhiga ilaa 500 mitir , hadii kale si qasab ah meesha looga rari doono.
Odayaal deegaanka oo isku dayay in ay arintan xal ka gaaraan ayaa ku guul dareestay in xal laga gaaro amarna kasoo baxay milatariga, waxa ayna sheegeen in saraakiisha milatariga ula hadleen si jees jees iyo awood sheegasho ah.
Xaafadaha kuyaala dhabarka dambe ee Wasaarada Gaashaandhiga ayaa waxaa degan qoysas aad u badan oo dhulkaasi iibsaday, lamana oga ujeedka xiligan soo dedejisay in shacabkaasi xoog lagu barakiciyo .
Dadka deegaanka ayaa wada abaabulka banaan baxyo ay uga soo horjeedaan amarkan dadka looga saarayo guryahooda, waxa ayna sheegeen dadka deegaaka in saraakiil hunguri doon ah ay doonayaan in dadka barakiciyaan.